Tababarka Photoshop: Saamaynta Harris Shutter | Abuurista khadka tooska ah
Shutter Wax ku ool ah waa a Saamaynta 3d inaad xaqiiqdii aragtay wax kabadan hal jeer. Waa saameyn aad u qurux badan oo muuqaal ahaan u muuqan kara halabuur, mustaqbal mustaqbal iyo halabuur maskaxeed. Waxaan ku heli karnaa midkood annaga oo ku codsanna barnaamijkayaga 'Photoshop' ama si toos ah kamaraddeenna. Si aan gacanta ugu qabanno, waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa inaan qabanno seddex miiraa midab. Shaandheyn cas, shaandho kale oo buluug ah, iyo shaandho kale oo cagaaran. Waxaan dhigi doonaa miirayaasha dhamaadka muraayadayada waxaan awoodi doonnaa inaan ku toogno xorriyad buuxda. Qoraalkan sida iska cad Waxaan arki doonaa nidaamka loo raaco si loo gaaro saameynta iyada oo loo marayo khalkhalgelinta sawir.
Marka hore, waxaan fureynaa sawirka aan ku shaqeyn doonno waana jareynaa haddii loo baahdo. Maskaxda ku hay in saameyntani ay si aad u fiican u shaqeyn doonto haddii aan ku shaqeyno muuqaal ka soo horjeeda iyo haddii ay yeelan karto taariikh madow ama madow, aad ayey ugafiican tahay.
Waxaan isla markiiba nuqul ka sameysan doonnaa lakabkeenna laba jeer illaa aan ka heleyno saddex nuqul, maskaxda ku hay inaan u baahanahay saddex midab. Mid kasta oo ka mid ah nuqulladan waxaan ku abuuri doonnaa lakab cusub.
Marka xigta waxaan qarin doonnaa dhammaan lakabyada marka laga reebo labada ka hooseeya waxaanan aadi doonnaa lakabka hufan si aan ugu dheehno midab casaan saafi ah. Waxaan laba jibaareynaa midabka hore iyo midabka RGB tab waxaan ku dabaqi doonnaa qiimaha 255 ilaa casaan, laga bilaabo 0 ilaa cagaar iyo 0 ilaa buluug. Waxaan xiiseyneynaa in kaliya midabada casaanka ah la ilaaliyo.
Ka dib markaan dahaadhno lakabkan waxaan wax ka beddeli doonnaa qaabkiisa isku dhafan ee Isku dhufashada. Tani waxay gaari doontaa isla natiijada sida haddii aan ku isticmaalnay filter-ka casaanka kamaradkeenna.
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa in la isku daro labada lakab waxaanna magaca u bixin doonnaa lakabka ka dhashay.
Marka xigta, waxaan hadda dhaqaajineynaa labada lakab ee sare waxaanan raaceynaa isla nidaamka.
Waxaan dib u cusbooneysiin doonaa jaakadda cad midab buluug saafi ah iyo dheriga rinjiga. Waxaan laba-jibbaareynaa midabka hore waxaanna ku dabaqi doonnaa qiyamka soo socda qaybta midabka RGB: Casaan 0, cagaar 0 iyo buluug 255.
Waxaan mar labaad ku dabaqi doonnaa qaab isku-dhaf ah oo isku-dhafan oo isku dhafan doona labada lakab si aan ugu magac-darin midka ka dhashay mar labaad
Ugu dambayntii waxaannu raaci doonnaa isla nidaamka labada lakab ee hadhay. Waxaan ku dhajin doonnaa lakabka hufan oo leh midab cagaaran oo saafi ah. Xaaladdan oo kale waxaan dib ugu laaban doonnaa qaybta midabka RGB markanna waxaan ku dabaqi doonnaa 255 oo cagaar ah iyo qiime 0 ah midabada harsan.
Waxaan ku dabaqi doonaa qaabka isku dhafka ah ee isku dhufashada.
Waxaan isku dari doonaa labada lakab oo waxaan magacaabi doonaa midka haray.
Markaanu sadarno saddexda lakab, waxa xiga ee aan samayn doonno waa inaan aadno labada codod ee sare, buluug iyo cagaar ah waxaanna ku dabaqi doonnaa qaab isku-darka si loo caddeeyo Tani waa wax xiiso leh maxaa yeelay haddii aad eegto, sawirka asalka ah ayaa dib u soo muuqday. Dalbashada tan, waxaan ku midownay RGB "kanaallada" si loola hadlo (casaan, cagaar iyo buluug) hal sawir isla markaana cawaaqib ahaan ay asal ahaan ugu dhaqantay si la mid ah tan RGB. Dhammaan noocyada hooska waxaa lagu soo saaraa iyada oo loo marayo saddex midab. Xiiso badan, sax?
Laakiin waxaan dooneynaa inaan abuurno saameyn 3D taasna waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa inaan u jiidanno lakabyadeena waxoogaa ah booska ku habboon. Xaaladdan oo kale ayaynu jiidi doonnaa lakabyada buluug iyo cagaar ah, laakiin dhab ahaantii waan la shaqeyn karnaa tan casaanka sidoo kale ama waxaan jiidi karnaa laba ka mid ah, mid ama saddexdooda. Tani waxay noqon doontaa go'aanka mid kasta.
Haddii waxa aan raadineyno ay yihiin saameynta Harris Shutter, waa inaan jiidanaa ama bedelnaa booska saddexda midab.
Si loo gaaro heerka 3D caadiga ah waa inaan ku hanannaa lakabyada buluug iyo cagaaran isku meel isla markaana kaliya aan ka beddelnaa booska lakabka cas.
Markii aan helno xalka ugu habboon, waxaan kaliya u baahanahay inaan abuurno koox lakabyo ah oo aan dib u magacawno. Waxaan jiidi doonaa sawirka jilaya kooxda lakabyada haddii ay dhacdo in sawirro aan fiicnayn nalaga jaro kaliya waxaan u isticmaali doonnaa qalabka tirtiraha burush si caddaalad ah u faafinaya una dhammaystiraya meelaha la doonayo.
Maskaxda ku hay in saameyntani ay khibrad u yeelan karto siyaabo kala duwan, xitaa waxaan ku ciyaari karnaa afar lakab oo matalaya qaabka midabka CMYK (Cyan, Magenta, Jaale iyo Madow). Haddii aan yeelnay, markaan daaqeyno mid kasta oo ka mid ah afarta lakab kaliya waxaan u baahanahay inaan ka raadinno midab kasta oo ku yaal tabka midabka 'CMYK'. Waxaan ka codsan lahayn 100% Cyan iyo boqolkiiba eber inta kale. Goor dambe ayaan sidan oo kale ku sameyn doonnaa midabka magenta, jaalle iyo ugu dambeyn madow. Sidoo kale waa in lagu daraa in kiiskan aan isticmaalnay hal sawir, laakiin howshu waxay noqon kartaa mid hal abuur badan hadii aan isticmaalno seddex sawir oo kala duwan oo isku qof ah, laakiin lagu qabtay dhaqdhaqaaqyo kala duwan. Tan awgeed waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho qaab toogasho oo isdaba-joog ah haddii aan ku shaqeyneyno sawirro nala soo qaaday. Runtii waa saameyn aad u qurux badan oo ku dari kara hodan badan halabuurkeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Tababarka Photoshop: Saamaynta Harris Shutter
Aad baad ugu mahadsantahay inaad i bartay sida tan loo sameeyo! Waxaan gartay inay ka fududdahay dhawaqeeda.